विद्यार्थीको सन्तुष्टि नै हाम्रो सफलता हो’ : प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुशल केसी – Chitwan Post
विद्यार्थीको सन्तुष्टि नै हाम्रो सफलता हो’ : प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुशल केसी
छोटो समयमै विद्यार्थीको मन जित्न सफल ओयसिस एजुकेसनले शुक्रबार सौराहामा विभिन्न शाखाका प्रमुख एवम् स्टाफहरुबीच भेटघाट तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । चितवनको लायन्सचोकमा मुख्य कार्यालय रहेको ओयसिस एजुकेसनको काठमाडौँ, पोखरा र पूर्वी चितवनको खैरहनीमा शाखामार्फत आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दै आएको छ ।
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा सन् २०१२ देखि कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुशल केसीले वार्षिक कार्यक्रमका अवसरमा अस्ट्रेलियाका लागि भिसाको नयाँ प्रक्रिया, जिटीईलगायतमा स्टाफबीच परामर्श गरेका थिए । उनी अस्ट्रेलियाका रजिष्टर माइग्रेसन एजेन्ट हुन् । नेपालदेखि अस्ट्रेलियाका कलेज, युनिभर्सिटीसम्म गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पीआरका लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्डलगायत विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियाका बारेमा उचित परामर्शबारे अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । कार्यक्रमको व्यस्तताका बीच कार्यकारी निर्देशक केसीसँग चितवन पोष्ट दैनिकले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
१) उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले ओयसिस नै किन रोज्ने ?
– अस्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श गर्ने एजेन्टहरु थुप्रै हुन्छन् । अस्ट्रेलियाका लागि जेजसरी प्रचार गरिएका हुन्छन्, ती सबै सत्य नहुन पनि सक्छन् । हामी व्यापारका साथै विद्यार्थीलाई सही परामर्श दिन्छौँ । अस्ट्रेलियाका लागि सीमित व्यक्तिमात्रै रजिष्टर माइग्रेसन एजेन्ट हुन्छन् । हाम्रो हकमा हामी व्यापारमा मात्रै केन्द्रित नभएर उत्कृष्ट सेवा पनि प्रदान गर्छौं । विद्यार्थीका लागि उचित परामर्शका साथै उनीहरुलाई सुहाउँदो सेवा दिने भएकाले विद्यार्थीहरुले ओयसिस रोज्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
२) कस्ता विद्यार्थीले अस्टे«लियाका लागि आवेदन गर्न सक्छन् ?
– खासगरी प्लस, ब्याचलर तथा डिग्री लेभलका विद्यार्थी थप अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जान सक्छन् । एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीले पनि भिसा प्रोसेसिङका लागि आवेदन गर्न सक्छन् । जोसँग जस्तो क्षमता छ, त्यही क्षमताअनुरुपको प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ ।
३) तपाईंको कन्सल्टेन्सीबाट भिसा आवदेन गर्ने कति प्रतिशत विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पुगेका छन् ?
– कुनै कन्सल्टेन्सीबाट भिसा आवेदन गर्दैमा खुरूखुरू भिसा लाग्ने होइन । भिसा कन्सल्टेन्सीका कारणले लाग्ने होइन । यसमा विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता र बलियो कागजात मह¤वपूर्ण हुन्छन् । यसमा विज्ञापनका लागि र सस्तो लोकप्रियताका लागि मेरो कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाइ गर्दा शतप्रतिशत भिसा लाग्छ भन्नेजस्ता कुराको कसैले विश्वास नगरे पनि हुन्छ । भिसा दिने नदिने कुनै कन्सल्टेन्सीको स्वेच्छाको विषय होइन । तर, म के भन्छु भने हामी त्यसरी प्रचार गर्दैनौँ । भिसा कति प्रतिशत लाग्यो भन्दा पनि भिसा प्रोसेसको पोलिसी के हो ? भोलि कलेज परिवर्तन गर्ने समस्या पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने कुरा विचार गरेर हामीले काम गर्छौं । व्यापारमात्रै सबैथोक होइन, विद्यार्थीको क्यारियर बन्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो ।
– हामी विद्यार्र्थीको करिअर सोचेर काम गर्छौं । खासगरी एकान्टेन्सी, आईटी, नर्सिङ, इन्जिनियरिङजस्ता विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले पीआर पाउन बढी सजिलो हुन्छ । क्षमताअनुसार कुनै पनि विषयमा दक्ष भएका विद्यार्थीले पीआर पाउन सक्छन् । हामीले कम्पनी सुरू गरेयता कुनै पनि विद्यार्थी समस्यामा परेका छैनन् । उनीहरुले कलेज परिवर्तन पनि गर्नुपरेको छैन । हामी विद्यार्थी सुहाउँदो कलेज र युनिभर्सिटी छनोट गर्छौं । कतिपय युनिभर्सिटी नेपाली विद्यार्थीले अफोर्ड नै गर्न सक्दैनन् । विद्यार्थीको क्षमताअनुसार कलेज छनोट गरेर जे प्रयोजनका निम्ति अस्ट्रेलिया गएको हो, त्यसैअनुरुप चल्न सके पीआर पाउन सकिन्छ ।
– विद्यार्थीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने अस्ट्रेलिया पैसा कमाउनका लागि जाने होइन, पढ्नका लागि जाने हो । महँगो कलेज शुल्क तिरेर, कलेज परिवर्तन गरेर, रमाइलो र काममा बढी ध्यान दिएर विद्यार्थी समस्यामा पर्ने गरेका हुन्छन् । सुरूमै आफूले अफोर्ड गर्नसक्ने कलेजको खोजी गर्नुपर्छ । पैसा कमाउने सोचाइले गर्दा पढाइ प्रभावित हुनुहुँदैन । हामीले एक सय बढी कलेज÷युनिभर्सिटी÷टेफहरुसँग एग्रिमेन्ट गरेका छौँ । सस्तो कलेज हुँदैमा सबै नराम्रा हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले, विद्यार्थी सुहाउँदो स्तरीय सेवा हामीले उपलब्ध गराउँछौँ भनेका छौँ ।
६) ओयसिसको सिड्नी अफिसले केकस्ता सेवा उपलब्ध गराउँछ ?
– विद्यार्थीका लागि फर्दर स्टडी, भिसा एक्सटेन्ड, स्किल भिसा एप्लिकेसनका साथै परमाटेन्ट रेडिडेन्ट (पीआर)सम्मको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । कलेज नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भए पनि उचित परामर्श दिएर विद्यार्थीलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । विद्यार्थीको सन्तुष्टि नै हाम्रो सफलता हो ।
मन्त्रीहरुका अस्वाभाविक ‘स्वआर्जन’
एकता, इतिहास निर्माण र जनचासो